Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Twitter kwi-Android? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazikhuphela njani iividiyo ze-twitter kwi-Android?
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 327
Ukusuka kwi-Smartphone yakho phantsi kwenkqubo yokusebenza ye-Android, inkqubo yokukhuphela iividiyo ilula kakhulu. Zimbini iindlela onokukhetha kuzo; Sebenzisa isicelo se-injini yokukhangela, nokuba yiChannel okanye nayiphi na enye, okanye usebenzise usetyenziso olukhutshwe kwivenkile yesicelo kaGoogle.
Ukusuka kwisikhangeli sewebhu:
Ukuba usebenzisa usetyenziso lwesikhangeli sewebhu, kuya kufuneka kuqala ungene kwiwebhu ye-twitter, ungene ungene kwi-tweet apho ikhoyo ividiyo ofuna ukuyikhuphela. Ukopa i-URL yevidiyo. Kule nto, kuya kufuneka ucofe ekunene kwividiyo. Kuya kuvela isithuba esincinci esithi "khuphela idilesi ye-url".
Ngedilesi ekhutshelweyo, kuya kufuneka ujonge kwenye ithebhu, iphepha lolawulo lokukhuphela kwi-Intanethi. Ngokubeka iikhrayitheriya zokukhangela kwiinjini yokukhangela, iziphumo zokugcwala okuphezulu komsebenzisi ziya kuvela. Inketho yokuqala ihlala ihlala https://www.downloadtwittervideo.com/
Ngenisa iphepha lokhetho lwakho. Uncamathisela i-URL oyikhuphele ngaphambili, kwibar emhlophe ehlala ibekwe embindini wephepha. Le bar ihlala isitsho ibinzana elibhekisa kwinkqubo enje "ngenisa idilesi ye-URL".
Unamathisela ikhonkco kwaye kwimeko yokukhuphela iphepha lewittervideo.com, uneempawu ezimbini. Enye yokukhuphela kwifomathi ye-MP4 kunye nokukhuphela ividiyo kwi-MP4HD. Ukuba ividiyo ofuna ukuyikhuphela inesisombululo esiphezulu, unokukhetha ukhetho lwe-HD, kungenjalo, unokukhetha kuphela i-MP4.
Emva koko ukukhuphela kuya kuqala. Inkqubo yokukhuphela ividiyo inokubonwa kwibar esezantsi yeinjini yokukhangela, ngepesenti eya kubonisa inkqubela phambili yenkqubo. Nje ukuba i-100% ifikelelwe, ividiyo iya kube igqibile ukukhuphela. Oku kuya kugcinwa kwifolda yokukhuphela. Ukusuka kwisicelo:
Phakathi kwezicelo ezenzelwe ukukhuphela iividiyo kwi-twitter sine-Snaptube okanye i-AVD donwloader. Ujongano kunye nokusingathwa kwezi zicelo ngokuthe ngqo kwaye kulula. Xa ungena uza kubona zonke izicelo onokukhupha kuzo iividiyo.
Khangela i-app ye-twitter. Nje ukuba isicelo sibekwe, ngenisa. Kuya kufuneka ungene ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Emva koku, skrola ixesha leakhawunti yakho kwaye ufumane i-tweet nevidiyo ofuna ukuyikhuphela.
Cofa kwindawo yokudlala yevidiyo. Okwangoku i-icon yokukhuphela iya kuvela kwicala lasezantsi lasevidiyo. Ngokuqhelekileyo oku kuya kuba kwimo yotolo olufakwe ngaphakathi kwepoligoni.
Cinezela i-icon yokukhuphela, kwaye isicelo siya kukubonisa ifomathi yevidiyo ekhoyo kunye nezisombululo. Ngokubanzi, izigqibo eziphezulu zihambelana nefomathi ye-MP4. Yeyiphi ifomathi esetyenziswa ngokubanzi kunye ekwabelwana ngayo kwinethiwekhi, ngenxa yokukwazi kwayo ukugcina iividiyo ezikumgangatho ophezulu kunye nobunzima obuphantsi.
Nje ukuba ukhethe ifomathi oyifunayo, ukhuphelo luya kuqala kwangoko emva koko. Ingabonakala njengotolo oluphezulu kwesikrini sefowuni. Iziphumo zokugqibela ziya kufumaneka kwigalari yefowuni yakho.
1.1 Ukusuka kwisikhangeli sewebhu:
Ndihamba njani ngokubeka i-Facebook kwimo emnyama?